बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एक सय १९ जनाविरुद्ध कारबाही सिफारिस भएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले १० महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताबारे कुनै उल्लेख छैन । अनियमिततामा विभिन्न निकायका कर्मचारी, व्यापारी र भूमाफियाको मिलेमतो रहेको तर राजनीतिक संलग्नता नभेटिएको सिआइबीले जनाएको छ । सिआइबीले उनीहरूविरुद्ध किर्ते र ठगी अभियोगमा कारबाही सिफारिस गरेको हो ।
कारबाही सिफारिसमा परेकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यात, पूर्वमन्त्री छविराज पन्त, पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहदेखि भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङलगायत छन् । बस्न्यातले भौतिक पूर्वाधार सचिव रहँदा बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको र त्यसका लागि उनी मुख्य जिम्मेवार भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । पूर्वसचिवहरू पन्त एवं अधिकारीले सरकारी जग्गा हिनामिनामा सहयोग पुग्ने गरी टिप्पणी पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको औँल्याइएको छ ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवाससहित एक सय ३४ रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा लगेर हिनामिना गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले २८ फागुन ०७५ मा विस्तृत अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई जिम्मा दिएको थियो । सिआइबीका एसपी बेलबहादुर पाण्डेले आफूहरूले गृहसचिव प्रेमकुमार राईसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको र मुद्दा दायरका लागि अर्काे चरणमा थप अनुसन्धान हुने बताए । सरकारबाट निर्देशन आएलगत्तै यसमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने सरकारको तयारी छ ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनले ललितानिवास प्रकरणमा जोडिएका पूर्वसचिवदेखि खरिदारसम्मका कर्मचारी, गुठी संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, सरकारले गठन गरेको समरजंग कम्पनीका पदाधिकारीसहितका कर्मचारी, खडा गरिएका नक्कली मोही र सरकारी जग्गा पहिलोपटक किन्नेविरुद्ध कारबाही सिफारिस गरेको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वलाई भने जोगाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराईदेखि विजयकुमार गच्छदारसम्म हिनामिना प्रकरणमा प्रत्यक्ष
जोडिएका थिए ।
पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी भने कारबाही सिफारिसमा परेका छन् । बालुवाटारको सरकारी जग्गामा नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गर्ने र सरकारी जग्गा गुठीको नाममा कायम गर्ने काममा जोशीलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको हो । जोशी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधारमन्त्री थिए । उनले नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गाको दर्ता सच्याई पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान मन्त्रिपरिषद्बाटै नीतिगत निर्णय गरिएकाले त्यस्ता निर्णय सच्याउन सिआइबीले सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
बस्न्यात प्रमुख योजनाकार, अन्य चार
पूर्वसचिवसहित ११९ लाई कारबाही सिफारिस
सिआइबीले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेका पूर्वसचिवहरू दीपकुमार बस्न्यात, छविराज पन्त, रवीन्द्रमान जोशी, नारायणगोपाल मलेगु र दिनेशहरि अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । उनीहरूले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने गरी भएको निर्णय प्रक्रियामा सघाएको सिआइबीको ठहर छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, माधवी शर्मा, उमाकुमारी ढकाल, रामेश्वर बिडारीलगायतलाई बिचौलियाका रूपमा कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले बहालवाला न्यायाधीशको समेत संलग्नता औँल्याउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । चितवन जिल्ला अदालतका कार्यरत न्यायाधीश विनोद गौतमलाई सिआइबीले कारबाही सिफारिस गरेको हो । गौतम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा उपसचिवका रूपमा कार्यरत रहँदा भूमाफिया समूहलाई सघाएको सिआइबीको निष्कर्ष छ । ०६६ सालमा उनी मन्त्रालयको कानुन शाखाका प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । त्यसवेला मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारको नाममा मोहीलाई जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो ।
सो समयमा दीप बस्न्यात मन्त्रालयका सचिव र विजयकुमार गच्छदार मन्त्री थिए । उनीहरूकै योजनाअनुसार नक्कली मोही खडा गरी प्रधानमन्त्रीनिवाससँग जोडिएको करिब १५ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । त्यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउने गलत राय गौतमले दिएकाले उनीसमेत संलग्न रहेको सिआइबीको निष्कर्ष छ । यद्यपि, सिआइबीले उनीसँग बयान भने लिएको छैन । सिआइबीले भूमाफिया र कर्मचारीतन्त्रको नेक्ससले ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको निचोड निकालेको छ ।
यो प्रकरणमा बस्न्यात प्रमुख योजनाकार देखिएका छन् । भूमाफियाको योजनाअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान उनले नै पहल गरेका थिए । सोहीअनुसार तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारको निर्णय गरेको थियो । त्यसको खास उद्देश्यले नक्कली मोही खडा गरेर भूमाफियालाई जग्गा दिने योजना थियो । सिआइबीले बस्न्यातसँग बयान लिए पनि तत्कालीन मन्त्री गच्छदारलाई भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन । अख्तियारको अनुसन्धानमा भने गच्छदारको समेत संलग्नता देखिएपछि बयान लिएको छ । तर, क–कसलाई मुद्दा चलाउने भन्नेमा सरकारबाट संकेत नपाउँदा मुद्दा दायर प्रक्रियामा जान सकेको छैन ।
ललितपुरमा ट्राफिक बत्ती जडान
दुई दिन हिँडेर चामल किन्‍न गएकी जुनकला रुँदै फर्किइन्
ओभर टाइमको भत्ता लिन बिहान ७ बजे नै हाजिर गर्छन् विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी
किन बर्खास्तीमा परे एसपी विष्ट ? गृहले दियो १४ कारण